Amanani 15 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
Porovnání s překladem: American Standard Version Basic English Bible Darby Version Douay-Rheims Kempton Translation King James Version Webster's Bible World English Bible Young's Literal Translation 한국 성경 (Korean) พระคัมภีร์ไทย Afrikaanse Vertaling 1953 Det Norsk Bibelselskap (1930) သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835) Bible kralická Det Danske Bibel Elberfelder Bibel (1871) Elberfelder Bibel (1905) Lutherbibel (1545) Lutherbibel (1912) Eestikeelne piibel Reina Valera (1909) Sagradas Escrituras (1569) Esperanto Biblé Bible Louis Segond (1910) Bible Martin (1744) Hrvatski prijevod Xhosa Giovanni Diodati Bibbia (1894) Riveduta Bibbia (1927) Vulgata Clementina Litova Biblio Károli (Vizsoly) Biblia മലയാളം ബൈബിൾ Dutch Staten Vertaling Almeida Atualizada Pyatiknizhie Moiseya (Makariya 1825) синодальный перевод (1876) Serbian (Daničić, Karadžić) Pyhä Raamattu (1933/1938) Vuoden 1776 kirkkoraamattu 1917 års bibelöversättning Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Vietnamese Bible (1934) Turkish Bible Arabic: Smith & Van Dyke Hebrew: Modern Hebrew OT: BHS (Consonants Only) Hebrew OT: BHS (Consonants & Vowels) Greek: Modern Greek OT: LXX [A] Accented Greek OT: LXX [A] Accented Roots & Parsing Greek OT: LXX [A] Unaccented Greek OT: LXX [A] Unaccented Roots & Parsing 新中文版 (简体) 新中文版(繁体) 联盟版(简体) 联盟版(繁体) 口語訳聖書
2 ThethaThetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa nithe nafika ezweni lokuhlala kwenu endininika lona,
3 nenza ukudla kwasemlilweni kuYehova, idini elinyukayo, nokuba ngumbingelelo wesibhambathiso esibalulekileyo, nokuba ngowokuqhutywa yintliziyo, nokuba ngowamaxesha enu amisiweyo, nisenza ivumbaivumba elithozamisayo kuYehova, nithabatha kwiinkomo, nokuba nithabatha kwimpahla emfutshane:
5 nesahlulo sesine sehin yewayini yomnikelo othululwayo, usenze ndawonye nedini elinyukayo; nokuba ngumbingelelo, ube ngowamvana-nyenye.
10 Woyisondeza newayini ibe yeyomnikelo othululwayo, esisiqingatha sehin: ukudla kwasemlilweni, ivumbaivumba elithozamisayo kuYehova;
13 Bonke abo bazalelwe kuloo ndawo baya kwenjenjalo kwezo zinto ekusondezeni kwabo ukudla kwasemlilweni, ivumbaivumba elithozamisayo kuYehova.
14 Xa athe waphambukela kuni umphambukeliumphambukeli, nokuba ngophakathi kwenu ezizukulwaneni zenu, wenza ukudla kwasemlilweni, ivumbaivumba elithozamisayo kuYehova: njengoko nenza ngako nina, uya kwenza ngakonaye.
15 Ngokubhekisele kuso isikhungu, woba mnye ummiselo kuni, nakumphambukeli ophambukele kuni, ummiselo ongunaphakade kwizizukulwana zenu. Njengoko ninjalo nina, woba njalonjalo umphambukeliumphambukeli phambi koYehova.
18 ThethaThetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Ekufikeni kwenu ezweni elondinisa kulo,
19 kothi ekudleni kwenu isonkaisonka selizwe, nirhumele uYehova umrhumo.
23 zonke izinto uYehova aniwisele umthethoumthetho ngazo ngesandla sikaMoses, kususela kumhla uYehova awawisa umthethoumthetho, nasemva koko ezizukulwaneni zenu:
24 kothi, ukuba kuthe kwenzeka into ngokulahleka, ingabonwa libandla, ibandla lonke lenze inkunzi entsha, ithole lenkomo, libe linye, ibe lidini elinyukayo, ibe livumba elithozamisayo kuYehova, ndawonye nomnikelo walo wokudla, nomnikelo walo othululwayo, ngokwesiko; nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nyenye, ibe lidini lesono;
26 Loxolelwa ke lonke ibandla loonyana bakaSirayeli, nomphambukeli ophambukele phakathiphakathi kwenu, ngokuba kubahlele oku abantu bonke ngokulahleka.
27 Ukuba ubani uthe wona ngokulahleka, wosondeza ibhokhweibhokhwe elithokazi elimnyaka mnye, ibe lidini lesono;
28 umbingeleli acamagushele umphefumloumphefumlo olahlekayo ngokona kwawo, ngokulahleka kwawo phambi koYehova. Akuwucamagushela, woxolelwa ke.
29 Kozalwayo phakathiphakathi koonyana bakaSirayeli, nakumphambukeli ophambukele phakathiphakathi kwenu, woba mnye umyalelo kuni, ngokusingisele kowenza ngokulahleka.
31 Ngokuba ulidelile ilizwi likaYehova, uwaphule nomyalelo wakhe; loo mphefumlo wonqanyulwa kanye, ubugwenxaubugwenxa buphezu kwawo.
32 Kwathi, oonyanaoonyana bakaSirayeli besentlango, bafumana umntu etheza iinkuniiinkuni ngomhla wesabathangomhla wesabatha.
33 Abo bamfumanayo etheza iinkuniiinkuni, bamsondeza kuMoses nakuAron nakwibandla lonke;
36 Lonke ibandla lamkhuphela ngaphandle kweminquba, lamxuluba ke ngamatye. Wafa, njengoko uYehova wamwiselayo umthethoumthetho uMoses.
38 ThethaThetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, mabenze iintshinga emasondweni eengubo zabo, kwizizukulwana zabo, bafake entshingeni yesondo intsontelo ebala limsi.
41 NdinguYehova uThixouThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa, ukuba ndibe nguThixonguThixo kuni: ndinguYehova, uThixouThixo wenu.
Arcana Coelestia 2177, 2180
Arcana Coelestia 922, 925, 1071, 1463, 1947, 2276, 2280, ...2466, 2576, 2788, 4444, 4581, 6377, 7839, 7978, 8013, 8495, 9223, 9391, 9468, 9995, 10038, 10054, 10137, 10262
Apocalypse Explained 141, 279, 324, 365, 376, 576, 655, ...778, 785, 817, 865, 1042
IEksodus 6:7, 12:14, 49, 18:14, 15, 22, 20:8, 23:19, 28:43, 29:40, 30:33, 31:14
ILevitikus 1:2, 9, 13, 17, 2:12, 4:2, 13, 20, 22, 26, 27, 31, 35, 6:14, 7:16, 11:44, 22:18, 33, 23:13, 17, 19, 23, 24:14
Amanani 6:15, 7:13, 9:13, 28:5, 7, 13, 14, 29:6
IDuteronomi 17:12, 22:12
1 Samuweli 3:14
2 Samuweli 12:9
1 Kumkani 8:41, 42, 21:13
2 yeziKronike 29:35
UHezekile 6:9, 44:30
UMateyu 9:20, 23:5
Izenzo zaBapostile 7:58
KwabaseRoma 11:16, 12:1
Hebhere 2, 5:2
2 Petros 1:15